account_box क्यापिटल नेपाल ,
प्रकाशित: २०७७ माघ १५, बिहीबार,०८:३९:PM
१. बिजुलीको महसुल अनलाइनमार्फत तिर्दा ५ रुपैयाँ ‘सर्भिस चार्ज’
२. ह्वात्तै बढाए बैंकले घरजग्गाको ब्याजदर, आधारदर कम भएका बैंककाे समेत १४ प्रतिशतसम्म पुग्यो
३. आजदेखि टी प्लस टू लागूः ब्रोकरले गरे स्वागत, बजारमा कस्तो पर्ला प्रभाव ?
४. बैंकिङ समूह चम्किँदा पनि नेप्सेलाई टिक्न धौ-धौ, मंगलबार थप उचाइको आशा
५. मंगलबारसम्म सेयरधनी बन्नेले नेपाल लाइफको ५१ प्रतिशत लाभांश पाउने
Prev Postमौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न व्यवसायीहरुको माग
Next Postसीमा क्षेत्रका ३० नाका खुला